कन्यालाई आज नयाँ यात्राकाे अवसर, अन्य राशिकाे के छ आज ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperकन्यालाई आज नयाँ यात्राकाे अवसर, अन्य राशिकाे के छ आज ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
कन्यालाई आज नयाँ यात्राकाे अवसर, अन्य राशिकाे के छ आज ?
आजको पात्रो : १७ चैत २०७८ बिहीबार । तद्नुसार मार्च महिनाको ३१ तारिक २०२२ । फागुनकृष्णपक्ष चर्तुदशी, पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र, शुक्ल योग र चन्द्रमा मीन राशिमा छ । आज बिहान सूर्योदय ५ः५६ मा भएको छ भने सूर्यास्त ६ः११ मिनेटमा हुनेछ । आज दिउँसो १ः४२ देखि ३ः१५ सम्म राहुकाल छ । त्यस्तै ११ः४४ देखि १२ः३३ सम्म अभिजित मुहूर्त छ । शैक्षिक गतिविधिका लागि बिहीबार राम्रो मानिन्छ । बिहीबारका दिन पुस्तक लेखन, शैक्षिक संस्थाको गतिविधि गर्नु उत्तम मानिन्छ । आजको देवता पार्वती ग्रहदेव चन्द्र छ
कर्कट (हि.हू.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो) : कर्कट राशिका जातकका लागि आजको दिन यात्रा गर्न लाग्नु भएको छ भने यात्राबाट फाइदा पुग्नेछ । आजको दिन सोचअनुसारको काम गर्दा फाइदा हुन्छ । व्यापारमा नयाँ लगानी गर्नु पनि सकिन्छ । अध्ययनअध्यापनमा लागेका कर्कट राशिका जातकका लागि नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ ।